प्रदेश खबर – Page2– दाङ खबर
संस्कृत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी पदावधि सकिदै
गोकर्ण पौडेल दाङ, भदौ ४ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको पदावधि सकिन थालेको छ । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको पदावधि सकिदै जाँदा सम्भावित पात्रको नाम चर्चा र भेटघाटलाई तिव्रता दिएका छन् । विश्वविद्यालयमा तीन वर्षे पदावधि सकिदै जाँदा केही पात्रले भने पुन पदाधिकारीमा आउने इच्छा जाहेर छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर कुलप्रसाद कोइराला, शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक रमेश ढकाल र कुलसचिवमा प्राध्यापक कात्तिकेय झा हुनुहुन्छ । शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक रमेश ढकालले पुनः पदाधिकारीका लागि इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति प्राध्यापक कुलप्रसाद कोइरालाको पदावधि भदौ ५ गते सकिदै छ । त्यसैगरी शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक रमेश ढकाल र कुलसचिव प्राध्यापक कात्तिकेय झाको पदावधि क्रमशः असोज र भदौमा सकिदै छ । विश्वविद्यालयको अबको उपकुलपतिमा संस्कृत विश्वविद्यालयका सेवा आयोगका
पन्ध्र हजार लिटर पानीको मूल्य सत्तरी रुपैया
गोकर्ण पौडेल दाङ, भदौ ४ । एक लिटर पानीको मूल्य कति ? साहेद धेरै अचम्म पर्नुहुन्छ होला ? वास्तविक मूल्य थाहा पाएपछि । एक लिटर पानीको मूल्य एक पैसाभन्दा कम पर्दछ । कुनै समयमा पाँच पैसाको ढ्याक पनि निस्कन्थ्यो तर अहिले एक रुपैयाको नोट यदाकदा बाहेक अन्यत्र देख्न समेत पाइदैन । यहाँको एक खानेपानी संस्थाले उपभोक्ताहरुलाई पानी वितरण गर्दै आएको पानीको मूल्य एक पैसाभन्दा कम रहेको छ । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको हापुरे पुरन्धारा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले पन्ध्र हजार लिटरको पानीको शुल्क ७० रुपैया मात्र लिने गरेको छ । प्रतिलिटर पानीको शुल्क एक पैसाभन्दा मुनि नै रहेको छ । जिल्लामा खानेपानी वितरण गर्दै आएको पानीको शुल्क सबैभन्दा महङ्गो बजार घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले ८ हजार लिटर पानीको शुल्क १६० रुपैया लिदै आएको छ भने घोराहीका शुल्क प्रति लिटर २० पैसा रहेको छ ।
ठेला व्यवस्थित गर्दै उपमहानगरपालिका
दाङ, भदौ ४ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अव्यवस्थित रुपले फलफुल तथा अन्य व्यापार गर्ने व्यापारीहरुलाई व्यवस्थापन गरिएको छ । वजारमा सडक र फुटपाथ अतिक्रमण गरेर अव्यवस्थित रुपमा रहेका पसल तथा ठेलाको व्यवस्थापनका लागि व्यापारीहरुसँग सहमति भएको हो । व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका कार्यपालिका सदस्य दिपक कुमालका अनुसार उनीहरुलाई तुलसीपुर नयाँ वसपार्कको पछिल्तिर रहेको खाली जग्गामा व्यवस्थापन गरिएको हो । ‘फलफुल वालालाई पछाडि अनि अन्य फुटकर व्यवसायीहरुलाई आलुमण्डि लाइन व्यवस्थित गरिएको छ ’ उनले भने । सदस्य कुमालका अनुसार वजार क्षेत्रभित्र रहेका बाँकी ठेलाहरुको व्यवस्थापनका लागि सल्यानमा रोडमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको जग्गा प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । तुलसीपुर वजारभित्र १ सय वढि व्यापारीहरुले अव्यवस्थित तवरले व्यापार गर्दै आएको कार्यपालिका सदस्य अमर नेपाली माइकलले वताए । उनले एकसातासम्म व्यापा
किराना पसलमा रक्सी
दाङ, भदौ ३ । वजार व्यवस्थापनका लागि व्यापारीहरु नै जिम्मेवारी हुने कुरा तुलसीपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन् । व्यापारका नाममा कतिपय व्यापारीहरुले जनताहरुलाई ठग्ने काम गरिएको समेत बोल्ने वक्ताहरुको भनाई थियो । व्यापारी र सरोकारवालका चमा भएको छलफल कार्यक्रममा वोल्दै इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरका शाखा प्रमुख श्रीधर टण्डनले १३ रुपैयाको मिनरल वाटर ३० रुपैयामा समेत विक्री भएको दृष्टान्त पेश गरे । ‘कसले कालो वजारी ग¥यो भन्दा पनि हामीले कत्तिको आवाज उठायौ यो पनि महत्वपूर्ण कुरा हो’, उनले भने । उनले वजारमा जतिसुकै अनियमितता भएपनि कसैले त्यसको विरोधमा आवाज नउठाएको वताए । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रुपवहादुर खत्रीले व्यापारीहरु कालोवजारी गर्छन् भन्नुभन्दा पनि त्यस्ता व्यापारीहरुलाई पहिचान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने वताए । ‘स्थानीय सरकार र प्रशासनले सबैलाई ए
तीन लाख लुटेर एक व्यक्ति फरार
बुटवल भदौ ३ । कपिलवस्तुको तौलिहवामाको तीन लाख रुपैयाँ लुटपाट भएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट रकम निकालेर लैजाँदै गरेको अवस्थामा अपरिचित समूहले उक्त रकम लुटेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल मल्लका अनुसार बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर १० का रामकुँवेर धोबीले बैंकबाट निकालेर लैजाँदै गरेको तीन लाख रुपैयाँ लुटिएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। धोबीले तौलिहवामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट निकालेको उक्त रकम कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर २ बाट लुटिएको प्रवक्ता मल्लले जानकारी दिए। भारतीय नम्बर प्लेटमा आएको दुई जनाको समूहले उक्त रकम लुटेर फरार रहेको उनले बताए। प्रहरीले रकम लुटेर फरार हुनेको खोजी गरिरहेको जनाएको छ। पछिल्लो समयमा कपिलवस्तुका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा लुटपाटका घटना बढिरहेको
पुरियो तुलसीपुर चोकको खाडल
घोराही भदौ ३ । सडक कार्यालय र निर्माण व्यवसायीले सडक मर्मतको कार्यमा ध्यान नदिदा जोखिम बढेपछि घोराहीको तुलसीपुर चोकमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत खाडलहरु पुरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा तुलसीपुर चोक आसपासमा रहेका खाल्डाखुल्डीलाई पुरेर जोखिम रहित बनाइएको हो । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत सडक सुरक्षामा आज सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिएको हो । घोराही उपमहानगरपालिकाको डोजर, टिप्पर सहित गिट्टी र केही गिट्टीहरु ट्राफिक प्रहरी निर्माण व्यवसायीहरुसँग सहयोग मागेर खाल्डाखुल्डी पुरिएको हो । सडक कालो पत्रे गर्ने क्रममा सडकनै व्यक्तिको नाममा हँुदा अलपत्र परेको सडकमा खाडल परेको छ । नगर क्षेत्र भित्र पर्ने भए पनि सडक मर्मतको जिम्मा सडक कार्यालयलाई रहेको छ । तर सडक र निर्माण व्यवसायीले ध्यान नदिदा स्थानिय सरकारले जोखिम रहित बनाउन अघि
पाल्पा भदौ ३। छोरा जन्माउने आशै आशामा पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीका ६७ वर्षीय सुमित्रा विकले १३ सन्तानको जन्म दिनुभएको छ । १३ वर्षको उमेरमा २८ वर्षीय नरबहादुर विकसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएकी सुमित्रा १५ वर्षको उमेरमा आमा बन्नुभयो । छोरा नजन्माउँदा समाजले नानाथरी नकारात्मक कुराहरु गर्न थालेपछि विकले १२ छोरी र एक छोराको जन्म दिनुभएको हो । नवौं सन्तानका रुपमा छोरा लोकबहादुर विश्वकर्माले जन्म पाएपछि नरबहादुरको परिवारमा खुशी छायो । “समाजमा छोरा नजन्माउने हो भने पहिले मेलापात, सहयोग आदानप्रदान केही पनि चल्थेन, आफ्ना लागि त छोरी भएपछि चित्त बुझाएकै थिए तर समाजकै लागि छोराकै आशै आशामा १३ सन्तानको जन्म दिएको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो । अहिले उहाँ छोराछोरी, नातिनातिना, पनातिपनातिना गरी ७० जनाको अभिभावक हुनुहुन्छ । छोराछोरी सबैले उन्नति, प्रगति, विभिन्न पेशा–व्यवसाय गरेको देख्दा र सुन्दा उहाँ ख
अवैध रुपमा चन्दा उठाउँदै गर्दा दुईजना पक्राउ
बर्दिया भदौ ३ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका मतङगा चोकबाट अवैध रुपमा चन्दा उठाउने कार्यमा संलग्न २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरुमा बर्दियाकै ठाकुरबाबा नगरपालिका-३ बस्ने ३३ वर्षीय दिल बहादुर कठायत र बढैयाताल गाउँपालिका-४ बस्ने ३६ वर्षीय बिसोम्बर थारु रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय वर्दियाबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरुलाई अवैध रुपमा चन्दा उठाइरहेको अवस्थामा फेला पारी हिजो सोमबार पक्राउ गरेको हो। उनीहरुको साथबाट काटेको चन्दा रसिदको ठेली १ थान, नकाटिएको ठेली ६ थान, सदस्यता पत्र २० थान, विभिन्न कमिटी गठन गरेको बुक १ थान, गाउँपालिका अन्तर्गत समूह गठन गरेको बुक १ थान, विभिन्न व्यक्तिबाट चन्दा उठाएको बुक १ थान र ४ हजार ३ सय रुपैयाँ समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ । यस विषमा स्थानीय प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रदेश ५ मा १०५ वटा सिसिटिभीबाट निगरानी
बुटवल भदौ ३। प्रदेश ५ मा रोल्पाबाहेकका सबै जिल्लामा सिसिटिभी जडान गरिएको छ। प्रदेशका ११ वटा जिल्लाका शहरी क्षेत्रको निगरानी गर्न सिसिटिभी जडान गरिएको हो। सिसिटिभी जडान गर्न सरकारले तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामध्ये दुई करोड ५९ लाख रुपैयाँमा उक्त कार्य गरिएको प्रदेश ५ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मधुसुदन लुइटेलले जानकारी दिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशभर १०५ वटा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सोही अनुसार अब ३५ स्थानमा मात्रै जडान गर्न बाँकी रहेको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्युठानमा नौ, अर्घाखाँचीमा सात, गुल्मीमा आठ, पाल्पामा १६, रुपन्देहीमा १०, नवलपरासी (पश्चिम) मा १८, कपिलवस्तुमा १४, बाँकेमा १५ र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत बुटवलमा आठ वटा सिसिटिभीक्यामेरा जडान गरिएको हो। दाङ, बर्दिया र रुकुम पूर्वमा जडान गर्ने काम जारी रहेको ट्राफि
अज्ञात समुहद्धारा एनसेल टावरमा आगजनि
दाङ भदौ ३ । पश्चिम दाङको शान्तीनगर गाउँपालिका वडा नम्वर ५ रगैंचामा रहेको एनसेल टावरमा गएराती आगजनि भएको छ । गएराती १ वजेतिर अज्ञात समुहले आगजनि गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ । विस्फोटका कारण टावरमा क्षति पुगेको प्रहरीले बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोदविक्रम शाहका अनुसार आगजनीबाट टावरको जेनेरेटर र तारमा क्षति पुगेको छ। टावरमा कसले आगजनि गरेको हो भन्ने नखुलेपनि नेत्रविक्रम चन्द समूहले आगजनी गरेको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ । यद्यपि, उसले अहिलेसम्म यसको जिम्मेवारी लिएको छैन । आगजनी गर्ने समुहको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।